Fenoarivo-Atsimondrano: novingavingaina ny filoham-pirenena | NewsMada
Fenoarivo-Atsimondrano: novingavingaina ny filoham-pirenena
Ambivitra ny tsy nisehoan’ny fitsaram-bahoaka raha tsy voafehy, ny asabotsy heriny teo teny Fenoarivo Atsimondrano. Mitaky fandraisana andraikitra hentitra ireo nanatri-maso ny famingavingana ny filoham-pirenena, Rajoelina Andry.
Tranga niseho ny namindran’ny fianakaviana iray eny Fenoarivo tany amin’ny mpitondra ny ady ifanaovany amin’ny tompon’ny tany bodoiny. Nentaniny ny vahoaka tsy handray sy hisotro ny tambavy CVO, ambarany fa nasiana maloton’ny filoham-pirenena. Tsy neken’ny maro io famingavingana io ka saika nampiharan’izy ireo herisetra raha tsy nalaky ny fanakanan’ireo mpizara tambavy.
Namidin’izy ireo an-tsokosoko ny tany nampikarakarana azy ka sarona teo am-pamindrana ny anarany izany. Nandoa vola amin’ireo tena tompony anefa ny mpividy ary niakatra fitsarana ny ady ka natolotry ny Fitsarana tampony azy ny fananana tamin’ny 2015. Tsy nety niala ireo nivarotra azy ka voatery namidin’ilay vaviantitra nahazo azy tamin’olon-kafa ny tany vao azony. Nifampiraharaha taminy indray ny tompon’ny tany vaovao, hampiala azy, nefa anaovany fihetsika tsy voahevitra sy fanaratsiana ary fandrahonana ho faty.
Miantso fandraisana andraikitry ny fitondram-panjakana ny vahoaka eny an-toerana.